काठमाडौमा न’र्सले नै पाइनन उ’पचार, अस्प’तालबाट रु’दै निस्किन…पूरा पढ्नुहोस् ।
काठमान्डौ : शनिबार दिउँसो करिब २ बजेको हुँदो हो । एउटी न’र्स क’टकटी पे’ट दु’ख्यो। दु’खाइ कम नभएपछि आइतबार बिहान थापाथली’स्थित प’रोपकार प्र’सूति तथा स्त्री’रोग अ’स्पताल पुगिन्। उनले आ’कस्मिक क\_क्षको टि’कट का’टिन् ।प्’रसूतिकी न’र्सले उनको स’मस्या बुझिन् र ज्व’रो जाँ’च गर्ने’लगायतका काम गरिन्। कुरा गर्दै जाँदा ती नर्स उनको साथीकी साथी रहिछिन्। यसरी सम्बन्ध जो\_डिँदा उनले ती बि’रामी न’र्सलाई डा’क्टरको का’र्य’कक्षमा लगिन्। तर, त्यहाँ डा’क्टर अरु बि’रामी जाँ’चिरहेका थिए।
उनी बाहिर नि’स्केर ला’इनमा बसिन्। एक/दुई हुँदै सबै बि’रामीलाई बोलाएर जाँ’च गरियो। तर, उनलाई कसैले बोलाएन। ग’र्भमा अढाइ महिनाको बच्चा रहेको र अ’त्यधिक र’क्तश्राव भइरहेकाले उनको पेट स’म्हालिन नै नस’क्ने गरी दु’खिरहेको थियो। सबैलाई बोलाउँदा पनि आफूलाई कसैले नबोलाएको उनले सु’नाइन् । उनले भनिन्, ‘मैले अर्की न’र्सलाई मलाई किन भित्र नबोलाएको भनेर सोधें? उहाँले के हो तपाईको स’मस्या भन्नुभयो। मैले आफ्नोबारे बताएपछि उहाँले भित्र जानुहोस् भन्नुभयो।’ भित्र गएपछि एकजना स्टा’फले उनलाई बे’डमा बस्न आ’ग्रह गरे।
त्यहाँ रहेका न’र्सहरूले डा’क्टरले बोलाए। तर, डा’क्टर आफ्नो का’र्यकक्षबाहिर थिए। बि’रामीलाई डा’क्टरले बाहिरै बोलाए। चिनेको साथीले भनेकाले डा’क्टरले बाहिरै राम्रोसँग जाँ’च्नु हुने भएछ भन्ने उनलाई लाग्यो। उनी उ’पचार पाउने आ’समा खु’सी हुँदै डा’क्टर नजिकै गइन्। तर उनलाई उप’चार गर्नु त कता हो कता ती डाक्टरले ‘भित्र मेरो का’र्यकक्षमा किन गएको’ भन्दै उनलाई ह’प्काउन थाले। त्यसरी ह’प्काउनुको कार’ण थियो उनी टेकुबाट आउनु। शुक्रराज ट्रपि’कल तथा स’रुवा रो’ग अस्प’तालमा को’रोना संक्र’मितको उप’चारमा स’क्रिय रहेको नर्स भएको थाहा पाएपछि उनले ख’प्की खानुपरेको थियो।
डाक्ट’रको ख’प्की खा’इरहँदा पनि उनले आफूलाई नि’कै गा’ह्रो भइरहेको बताइन्। भनिन्, ‘डा’क्टरसाब मलाई स’न्चो नभएकाले एक हप्ता यता बि’दामा छु। अनि मसँग कोरोना नेगे’टिभ रहेको रि’पोर्ट पनि छ। तपाई स’शंकित हुनुपर्दैन। ढु’क्कसँग उप’चार गर्दा हुन्छ।’ तर, उनको वि’लाप र पी’डाले डाक्ट’रको क’ठोर मन प’ग्लिन सकेन। डाक्टरले क’ठोर मु’टु लिएर न’र्सलाई झ’पारिरहे। उनले यसो पनि भनिन्, ‘हो म टेकु अस्प’तालको आइ’सोलेसन वा’र्डमा काम गर्छु। तर, बि’रामीको सम्प’र्कमा हामी जतिबेला पनि पुग्दैनौं।
बि’रामीलाई छुट्टै राखेर सिसी क्या’मरामा’र्फत नि’गरानी गर्छौं। विश्व स्वा’स्थ्य संग’ठनले अ’पनाउनु भनेको नि’र्देशन पा’लना गरेर उप’चारमा सं’लग्न हुन्छौं। आ’कस्मिक पर्दा मात्र बि’रामीलाई हेर्न जान्छौं। जुन कुरा तपाई जस्तो डा’क्टरलाई सु’झाइ रहनु नपर्ला।’ तर, डा|क्टरलाई नर्सको त्यस्तो प्र’ष्टीकरणले ह’ल्लाउन सकेन। एक हप्ता बि’दामा बसेको र त्यसको एक हप्ताअगाडिको पिसिआर परी’क्षण गरेको रिपो’र्ट देखाउँदा पनि बि’रामी न’र्सको कुराबारे सु’नुवाई भएन। एक नर्स डाक्टरकै अगाडि बि’ताप गरिरहिन्। छ’ट्पटाइ रहिन् ।
तर, उनको उ’पचार हुँदैन ।उनको आँ’खाबाट आँसु झरिरहे। गाला हुँदै बहेका आँ’सु सुकेर सि’र्का बने। केही थोपा आँसुले सल भि’जाए। केही थोपा भूइँमा खसेर बाफ बने। तर, डा’क्टरको मन प’गाल्न सकेनन्। ती न’र्सले जति अ’लाप गर्दा पनि डाक्टरले टेर्दै टे’रेनन्। अनि उनी क’ड्किइनँ। भनिन् ‘तपाई बि’रामीको उपचा’र किन गर्नु हुन्न?’ नि’र्दयी डाक्ट’रले ‘हाम्रो अ’स्पतालको प्रो’टोकल फरक रहेको’ भन्दै मोटो ज’वाफ फ’र्काए। बि’रामीको उपचार नै गर्न नमिल्ने अ’स्पतालको कस्तो फरक प्रो’टोकल रहेछ? स्वास्थ्य क्षे’त्र बुझेकी न’र्स आफैं त्यस्तो गै’रजिम्मेवार उत्तर सुन्दा छ’क्क परिन्।
उनलाई अस्प’तालमा जाँदा बि’रामीको उप’चार नगर्नु भन्ने सं’विधानको कुनै पनि धा’रामा नलेखिएकाले यो कस्तो प्रो’टोकल रहेछ भनेर अचम्म लाग्यो। उनले त्यसरी क’ड्किएपछि टेकु अस्प’तालमा का’र्यरत भएको हुँदा उ’पचार गर्न मिल्दैन भनेर ठा’डै जवाफ दिए।त्यसपछि तपाईले स्वास्थ्यक’र्मीलाई यस्तो व्य’वहार गर्नुहुन्छ भने अन्य बि’रामीलाई कस्तो व्य’वहार गर्नुहोला? भन्दै उनी पनि थ’प क’डा बनिन्। उनले सम’बन्धित नि’कायमा उ’जुरी दिनेसम्म बताइन्। तर, ती डा’क्टरले ‘जसलाई सक्नुहुन्छ भन्नुहोस्’ भन्दै उल्टै थ’र्काए।
त्यसपछि उनी नर्सि’ङ नि’र्देशकको का’र्यकक्षमा गइन्। त्यहाँ कोही नहुँदा उ’पचार नै नपाएर दु’खिरहेको पे’ट बोकेर उनी रुँदै अस्प’तालबाट बाहिरिन्। ‘डा’क्टरको त्यस्तो व्य’वहारले आफू स्वास्थ्यक’र्मी हुँ भनेर देखाउन ला’ज लाग्यो। का’र्ड झोलामा हालेर हिँडे ।कमसेकम स्वास्थ्यक’र्मीले बि’रामीको बारेमा त केही सोचेर उ’पचार दिनुपर्ने हो। तर, त्यो हुन सकेन। म को’रोना संक्र’मित नै हुन्थे भने पनि चि’कित्सकले सु’रक्षा प्र’बन्ध मि’लाएर उप’चार गर्नुपर्ने हो।’ साथमा उनकै न’र्स साथी पनि यो दृश्यको प्र’त्यक्षद’र्शी थिइन् ।जो उनलाई लगेर प्र’सूति गृ’ह पुगेकी थिइन्।
र’गत ब’गेर ग’लेको थियो उनको शरीर। त्यसपछि उनी उपचा’रका लागि पाटन अस्प’ताल पुगिन्। यो घ’टनाले उप’चार नै नपाउने त्रा’स भएपछि पा’टनमा उनले आफ्नो परि’चय लुकाइन्। र, उ’पचार पाइन्। एक स्वा’स्थ्यक’र्मीले नै राजधानीको मु’टुमा रहेको अस्प’तालमा उप’चार न’पाउनु र डाक्ट’रबाट दुव्र्’यवहार हुनुले यतिबेला उनको मन कुँ’डिएको छ।